Dhageyso:Kismaayo oo bandow maalin ah lagu soo rogay iyo Wafdiga Dr Saacid oo lasugayo |
Dhageyso:Kismaayo oo bandow maalin ah lagu soo rogay iyo Wafdiga Dr Saacid oo lasugayo
Wararka ka imaanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in siwayn looga dareemayaa guud ahaanba Magaalada u diyaar garowga soo dhaweynta Wafdiga Raisul Wasaare Cabdi Faarax Shirdoon (Saacid) oo la filayo in saacadaha socda uu soo gaaro Magaalada.
Shacabka magaalada Kismaayo ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay booqashada la filayo inuu magaalada kuyimaado Dr Saacid.
Dhanka kale Taliyaha ciidamada amniga Kismaayo Maxamuud Qaalib ayaa sheegay in laga billaabo 6:00 aroornimo ilaa 12:00 duhurnimo ay magaalada bandow tahay.
Wuxuu sheegay in sababta bandowga ay tahay in laga hortago in ay dhacaan falal nabadgelyo-darro oo la sugo ammaanka wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo uu hoggaaminayo raysul wasaare Cabduqaadir Faarax Shirdoon oo la filayo in ay Kismaayo soo gaaraan.
Taliye Qaalib ayaa kula dar daarmay dadka reer Kismaayo nay ku sugnaadaan guryahooda inta uu socdo Bandowga isla markaana ay u hogaansamaan Amarada Laama amaanku bixiyaan si looga hortago falal amaanka lidi ku ah oo ka dhacay halkaasi.
Riix Halkan si aad udhagaysato Amarka taliyaha